Ny sehatra marketing mailaka tsara indrindra ho an'ny orinasanao | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | teknolojia
Misy izao a serivisy serivisy izay manandrana mankasitraka ny fitantanana ny mailaky ny mpanjifa rehetra mba hanatanterahana fampielezan-kevitra mahomby. Ny sehatra toy ny Mailrelay handefasana mailaka be dia be no mahasolo ny fahasambarana rehefa misafidy ny mpihaino izay mety indrindra amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing.
8 foana Contact
12 Valiny mitsangana
Una safidy hafa mahaliana toy ny marketing amin'ny mailaka ary niditra an-tsehatra tsara izany eto amin'ny firenentsika dia Mailrelay. Izy io dia manana drafitra isam-bolana maimaim-poana mahatratra 3.000 ny mpanjifa ary mampiasa fiasa sasany handraisana azy toa ny statistikan'izy ireo mandroso, ny algorithma azy manokana hanampiana ny fahatongavan'ny mailaka be, manana ny mpanolo-tsaina anao manokana ary autoresponder maimaimpoana azonao amboarina.
Tsy misy isalasalana, Mailrelay dia sehatra iray hidirana amin'ny tontolon'ny marketing mailaka ary fandefasana mailaka handeha hitsapana izay mety hahaliana antsika indrindra. Dia a amin'ireo safidy ireo izay mifanaraka amin'ny lalànan'ny angon-drakitra eoropeaninaNoho izany, raha manahirana anao ity olana ity dia safidy iray ny handinihana ireo fampielezan-kevitra amin'ny mailaka faobe. Izy io dia manana tapakila mialoha izay mamela anao hahatratra imailaka marina momba ny vidin'ny fifaninanana ary misy ny fetran'ny mpamandrika amin'ireo mailaka nalefa. Ho antsipirihany, manana fampiharana ho an'ny iPhone ao amin'ny drafitra Enterprise izy.
Mailchimp dia nipoitra ho iray amin'ireo serivisy tsara indrindra raha ny amin'ny fitantanana ny mailaka rehetra azonay avy amin'ny mpanjifa an'arivony maro izay nisoratra anarana tamin'ny mailaka nosoratanay. Na dia noho ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra eropeana aza, ity serivisy ity Nanana mpanohitra mafy be izy hodiovina ary ampiasain'izy ireo hipetraka any amin'ny tany eropeanina ny angon-drakitra misy azy ireo, ka tsy antony tokony hanairana izany raha toa ka mitady ny lisitry ny mailaka nomen'ireo faritra ireo izahay.
Izahay dia teo aloha iray amin'ireo anarana lehibe rehefa miresaka momba ny marketing amin'ny mailaka ny iray. Ny hatsarany dia mandalo fanolorana karazana endri-javatra isan-karazany izay ahafahan'ny orinasa lehibe na orinasa kely hiasa tanteraka amin'ny marketing mailaka ilain'izy ireo amin'ny sehatra tokana.
Ho an'ireo zatra ny toetran'i Mailchimp, afaka miresaka asa fototra efatra isika- Mpanangana fampielezankevitra tsotra, fisehoan-javatra mandeha amin'ny alàlan'ny fanamoriana mailaka mahery, fanadihadiana lalina, ary fidirana an-jatony amin'ireo sehatra hafa. Azontsika atao ihany koa ny miresaka momba ny maodelinao na ilay rafitra fitarihana sy fampidirana mba hanamorana ny fanaovana fanentanana.
Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra, ho an'ny serivisy niorina tamin'ny taona 1998, dia ny fahaizana mamorona lisitra mailaka marobe hitahiry vondrona samihafa mpanjifa. Azonao atao ny mamorona ny filaharana mandeha ho azy ho an'ny mailaka tadiavinao, mba hampiasa azy ireo "hamoahana" ny atiny amin'ireo mpamandrika ananantsika.
Manolotra fidirana amin'ny tranomboky modely, interface interface-drag-drop, fampiharana finday mba tsy hanadinoanao zavatra amin'ny tranokala rehetra, fampidirana haino aman-jery sosialy ary ny safidy handalo ilay andrana maimaimpoana miaraka amina fetra 500 fifandraisana. Angamba ity teboka ity dia hampody anao, satria ho hitanao haingana fa maro an'isa ianao ary tsy maintsy miroso amin'ny fandoavanao isam-bolana.
Azontsika atao ny miresaka momba azy ireo CRM dia miasa hitantana ireo fitarihana vaovao tadiavinay, na ny tontonana fanaraha-maso tena tsotra amin'ny fampiasana azy izay ahafahanao mandahatra ny fandefasana mailaka marobe. Miatrika ny iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra izahay, raha mila serivisy fanampiny ankoatra ny fitantanana ny gazety.
Izy io dia mampiavaka azy amin'ny alàlan'ny fifamatorana drag-and-drop, automatisation marketing, tontonana fanaraha-maso intuitive, ny fitaovany amin'ny fitantanana fifandraisana ary ny fahaizana mamorona fizotry ny varotra manokana. Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny fahaizany mampiditra amin'ny fampiharana 150 mahery. A amin'ireo sehatra tsara indrindra ho an'ny orinasa kely sy fanombohana izay manomboka ny diany ary te hanana ny zavatra rehetra ho iray: marketing amin'ny mailaka, CRM ary sehatra mandeha ho azy.
Mivantana amin'ny famoronana hafatra manokana ary izany dia mampiavaka ny mpanjifanay rehetra nanaovanay sonia. Ny mailaka nataonao rehetra dia natao tamin'ny fomba fiasan'izy ireo tsara tamin'ny famahana sy ny haben'ny efijery samihafa.
Mety amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fandefasana fampielezan-kevitra amin'ny fotoana voafaritra mba hahafahany mivoaka amin'ny fotoana tadiavintsika fotsiny. Iray amin'ireo serivisy malaza indrindra, mahatratra orinasa 200.000 XNUMX manerana an'izao tontolo izao.
Iray amin'ireo anarana manandanja amin'ny marketing amin'ny mailaka. dia tonga lafatra amin'ny orinasa kely / salantsalany ary azontsika atao ny milaza fa ny kalitao tsara indrindra dia ny mitondra antsika mivantana amin'izay ilaintsika amin'ny serivisy marketing mailaka. Midika izany fa, raha manomboka eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra.
Manolotra modely isan-karazany, mihoatra ny 500, ary malaza amin'ny fanohanan'ny mpampiasa sanda. ny azy Ny vidiny dia mora vidy raha ampitahaina amin'ny serivisy hafa ary manana toetra vitsivitsy tokony hasiana tsipiriany izy io, saingy ny fintinina amin'ny inona ny sehatra marketing mailaka dia iray amin'ireo soatoavina lehibe indrindra. Azonao atao ny manome tsiny ny tsy fisian'ny lalàna ho an'ny mandeha ho azy, fa raha tsy izany, folo. Ankasitrahana ihany koa fa manana azy io amin'ny Espaniôla isika, noho izany dia tsy mahantra na inona na inona izy io.
Uno manomboka amin'ny marketing vaovao ka hatramin'ny mailaka ary tapaka izany fa ho sehatra tsara indrindra ho an'ireo bilaogera, mpanoratra ary ireo izay manolo-tena hampahafantatra ny karazana vokatra rehetra. Araka ny efa nolazainay, mifantoka amin'ny bilaogera izy ireo, noho izany dia manana andiana fitaovana mora be hamoronana lisitra sy hamindrana ny atiny amin'ny alàlan'ny mailaka marobe.
Fandraisana iray misy antsipiriany kely, izay manohana ny fomba fijerin'ny endrika tranonkala, ny mailaka betsaka ary ny fizotran'ny automatique, nefa tsy manadino ny fizarana noforonina ho fananganana doka mailaka manodidina ny taranja tranonkala. Tsy manana safidy malalaka izy ireo, ary avo roa heny noho ny GetResponse ny vidiny, noho izany dia mila mijery an'io asa manokana io ianao mba hainay ny manararaotra tsara azy raha mpitoraka bilaogy isika.
Mianjera amin'ireto andalana ireto amin'ny fitsarana mandritra ny 60 andro anao izay ahafahanao mahafantatra raha izany no ilainao. Ny iray hafa natao ho an'ny orinasa kely ary miavaka amin'ny fanamorana azy rehefa manitsy ireo modely natolotry ny toerana misy anao. Ny iray amin'ireo soatoavin'izy ireo dia ny fahatongavan'ireo mailaka goavambe misy 98% sy ny zavatra ireharehany.
Azontsika atao ihany koa ny maneho hevitra amin'ny interface vaovao nohavaozina mandraka androany, automatique fanentanana tsotra ary ny fotoam-pitsarana azy izay mahatratra 60 andro hahafahanao mandresy lahatra ny tenanao. Rehefa misafidy sehatra iray dia mahaliana ny manandrana maro, ary raha avelany hampiasa toy ny Constant Contact, dia mihatsara kokoa. Ny iray amin'ireo teboka manimba azy dia ny endrika voafetra ary koa ny safidy famolavolana.
Un serivisy mirehareha amin'ny endrika tsara ary tsikaritra izany amin'ny fotoana hijerentsika ireo fanangonana modely tsara arosony antsika. Ny ekipa ao ambadik'ity serivisy ity dia manolotra ny fahaizana manakarama azy ireo hamorona modely tokana na handamina fampielezan-kevitra mihitsy aza.
Tafiditra anaty fampiharana toa ny Shopify, mba hahafahanao mifantoka amin'ny mailaka izay nividy ny iray amin'ny vokatray. Tsy serivisy mora vidy io, fa iray amin'ireo mety indrindra mamorona mailaka manana fikasana manokana.
Miatrika safidy hafa amin'ny Espaniola izahay izay manalavitra ny hafa amin'ny manolotra ny fahaiza-mitantana ny fifandraisana rehetra ananantsika amin'ny fampiharana hafa izay efa ampiasainay amin'ny orinasanay. Mpanjifa izay efa ananantsika ao amin'ilay lisitra, ankoatry ny fanomezana ny fotoana hahitana fifandraisana vaovao hanatevin-daharana ny lisitry ny famandrihana.
Tafiditra amina sehatra toa ny Salesforce na koa Drupal, azonao atao ny manafatra ny fifandraisana ary mampiasa ny angon-drakitra mba hampisaraka ireo lisitra noforonina. Tsy azonay esorina ny fitaovan'ny tambajotra sosialy mba handefasana hafatra any amin'ny Twitter sy Facebook.
Ity fitaovana marketing amin'ny mailaka ity dia miasa ho an'ny hafatra mailaka sy SMS, ka "roa amin'ny iray" ho an'ny tranonkalanao. Sehatra lavorary hampidirina ao amin'ny WordPress, PrestaShop ary Magento, ary koa ny fananana ny API hampiditra azy irery.
Ny takelaka mailaka, ny fampielezana drip ary ny mailaka transactional dia anisan'ny asany lehibe indrindra, toy ny fahaizana mamorona modely ho antsika manokana na manafatra pejy HTML handefasana azy ho mailaka. Maimaimpoana ny vidiny mandra-pandefasana mailaka 9.000 isam-bolanaAvy eo isika dia tsy maintsy mamaky ilay boaty amin'ny $ 7,37 isam-bolana mba handefasana mailaka 40.000. Oh, ary amin'ny fiteninay koa io.
Valiny mitsangana mampiasa interface tsotra sy madio izay manamora ny zavatra rehefa manoratra mailaka kanto be alefa any amin'ireo mpifanerasera aminay. Ny modely vita vonona dia azo ampiasaina, amboarina ary avadika ho mailaka sy endrika fisoratana anarana.
Alohan'ny firafitry ny mailaka natokana ho an'ny finday, na, inona no mitovy, mamaly. Azonao atao ny mampifangaro azy amin'ny Salesforce hahafahana miditra amin'ireo tetikasa marketing efa mandroso kokoa. Maimaimpoana mailaka hatramin'ny 4.000 sy fifandraisana 1.000 isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » Ny sehatra fitantanana bilaogy tsara indrindra
Raha ny fahitako azy dia tokony ampidirina ao amin'ity lisitra ity i Acumbamail, miasa be izy ireo ary manana vidiny mifaninana tokoa.
Tsy nahalala azy i Maria, misaotra anao nampahafantatra azy! Miarahaba, hojereko tsara: =)